नयाँ वर्ष : सेलिब्रेटीहरुको योजना
कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला केही वर्षदेखि निकै व्यस्त छिन् । छक्का पञ्जाको प्रोडक्सनदेखि विदेशी कार्यक्रमहरूसम्ममा उनको व्यस्तता निकै रह्यो । यो कुराले उनी आफै पनि अब केही आराम चाहियो र आफ्ना लागि समय दिनुपर्छ भन्ने सोच्न थालिन् । यसपटक पनि उनको टिमले नयाँ वर्षकै दिन एउटा नयाँ चलचित्र सुरु गर्न लागेको छ तर उनी यसपटक त्यसमा निर्देशकका रूपमा नभई निर्मातृका रूपमा मात्र संलग्न हुनेछिन् । वर्षमा एउटा मात्र चलचित्र निर्माण गर्ने दीपाश्रीको टिमले यसपटक दुई वटा चलचित्र लन्च गर्ने भएको छ ।दुवैमा दीपाश्रीले मात्र लगानी गर्नेछिन् । दीपाश्रीले केही वर्षदेखि आफ्नो स्वास्थ्य, फिटनेस तथा ब्युटीको ख्याल गर्ने मौका पाएकी थिइनन् । यो वर्ष ब्युटी तथा फिटनेसमा आवश्यक समय खर्च गरी आफ्ना लागि समय निकाल्ने योजना छ । दीपा भन्छिन्–एक वर्षको मेहनतले म पक्कै सुन्दर र हेल्दी हुनेछु । अब म २०७७ सालमा मात्र छक्का पञ्जाको सिरिज लिएर निर्देशकका रूपमा आउनेछु । कभर गीतमा हिट त्रिशाला गुरुङले यो वर्ष आफ्नै गीत रेकर्ड गराई श्रोतामाझ आउने सोच बनाएकी छिन् । उकाली चढौंला, गैरी खेतको, सपना भई, पोहोर साल आदि गीतको कभर गीत गाएर धेरैको मन जितेकी त्रिशालाले यो वर्षको सुरुदेखि नै आफ्ना गीत रेकर्ड गर्दै जाने बताइन् । उनले केही चलचित्रमा स्वर दिए भए पनि आफ्नै गीत भने आगामी वर्षदेखि निरन्तर गाउने बताइन् । वैशाखको सुरुतिरै उनी कार्यक्रम लिएर अस्ट्रेलिया जाँदैछिन् । त्यहाँ उनले ४ वटा सहरमा प्रस्तुति दिनेछिन् । कभर गीतबाट हिट भए पनि आफ्नो गीत नहुँदा धेरै नै फरक पर्ने उनले अनुभव गरेकी छिन् । हुन त कभर गीतकै माध्यमबाट उनले युके तथा दुबईका कन्सर्टमा भाग लिइसकेकी छिन् तर यो वर्ष धेरैभन्दा धेरै आफ्नै गीत रेकर्ड गराउने योजना छ । म्युजिक नेपालले उनका केही हिट कभर गीतको भिडियो युट्युबबाट हटाइदिएपछि त्रिशालाले आफ्नै गीत गाउने सोच बनाएकी हुन् । त्रिशालाका प्रशंसकहरूले २०७६ सालको सुरुदेखि नै उनका गीत सुन्न तथा हेर्न पाउनेछन् । त्रिशाला नयाँ वर्षको अवसरमा आफूमा भएको अल्छीपन हटाउने संकल्प पनि लिन्छिन् । नायिका तथा कोरियोग्राफर पवित्रा आचार्यले नयाँ वर्षको खासै योजना बनाएकी छैनन् । उनी नयाँ वर्ष नेपालमै बसेर आफन्त तथा साथीभाइसँग रमाइलो गरी मनाउने योजनामा छिन् । चलचित्र होलिडेको केही छायांकन बाँकी भएकाले त्यसलाई पूरा गरी नयाँ चलचित्रमा हात हाल्ने आचार्य बताउँछिन् ।आगामी वर्ष चलचित्र कोरियोग्राफीमा बढी सक्रिय हुने उनको सोच छ । केही चलचित्रमा कोरियोग्राफीका लागि प्रस्ताव पनि आइरहेको उनले बताइन् । पवित्रा नयाँ वर्षको आगमनसँगै नयाँ जोस–जाँगरका साथ नयाँ काम गर्ने, सकारात्मक सोचको विकास गर्ने कुरा बताउँदै आफू सधै खुसी र स्वस्थ रहन सकूँ भन्ने प्रार्थना गर्छिन् । गएका वर्षहरूको तुलनामा आगामी वर्ष आफू बढी समय काममै फोकस हुने आचार्यले बताइन् ।गायिका जुना प्रसाईं अमेरिकामा कन्सर्टमा व्यस्त छिन् । उनी नयाँ वर्षमा पनि उतै रहनेछिन् । गायनविना जीवनको कल्पनासम्म गर्न नसकिने कुरा बताउने जुना २०७६ सालमा पनि धेरैभन्दा धेरै गीत रेकर्ड गरी देश–विदेशको भ्रमणमा रहने योजनामा छिन् । मिस नेपाल उषा खड्गी पनि आगामी दिनमा उस्तै जोस–जाँगरका साथ व्यस्त रहने सोचमा छिन् । केही वर्षदेखि उनी विभिन्न ब्युटी कन्टेस्टमा कोरियोग्राफरका रूपमा समेत व्यस्त रहँदै आएकी छिन् ।यसपटक अलि बढी प्रोफेसन हिसाबले काम गर्ने उनले बताइन् । उषा फेसन डिजाइनर पनि हुन् । उनी फेसन डिजाइनरका रूपमा अहिले चलेका ट्रेन्डका पहिरन डिजाइन गर्नुका साथै स्टेज शो एवं कोरियोग्राफी गर्ने योजनामा छिन् ।उषाले आगामी दिनमा आफ्ना कमी–कमजोरी हटाउने संकल्प लिएकी छिन् । खड्गी भन्छिन्–‘म अलि संवेदनशील छु । कोही रिसाउँछ कि भनेर नाइँ भन्न अप्ठ्यारो मान्थें तर यी कुरामा अब सुधार गर्दै जानेछु ।’
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ, वैशाख ८, २०७६
आफ्नो लक्ष्य पहिचान गरौं
कतिपय विद्यार्थी सोच–विचार नगरी आफ्ना साथीभाइको कुराबाट प्रभावित भएर त्यही कोर्सतर्फ आकर्षित हुन्छन्, जहाँ सबैजान चाहन्छन् । यद्यपि उनीहरू त्यहाँ केही दिनमै बोर हुन थाल्छन् र अर्को कुनै कोर्सतर्फ जान चाहन्छन् । यसो गर्दा समय, सम्पत्ति एवं शक्ति बर्बाद हुन्छ ।
नारी संवाददाता , वैशाख १८, २०७५
कसरी सफल हुने ?
नारी संवाददाता , वैशाख १७, २०७५
हरेक बिहान उठेर जीवनलाई धन्यवाद दिँदै आभार प्रकट गरौं । जीवनको यो अमूल्य उपहारलाई स्वीकार गरी यसको महत्व बुझ्नुपर्छ । नयाँ वर्ष त क्यालेन्डरमा आउँँछ, तर सत्य के हो भने हरेक दिन नयाँ सम्भावना बोकेर आउँछ । त्यसैले हरेक दिनको स्वागत उत्साह र साहसका साथ गर्नुपर्छ ।
रोजिन शाक्य, वैशाख १७, २०७५
२०७४को वर्ष तस्बिर
नारी संवाददाता , वैशाख ३, २०७५
नयाँ वर्षलाई स्वागत
यो समाजका भनौं वा यो सिङ्गो पृथ्वीका कुनै पनि मानिसलाई नराम्रो बन्न मन लाग्दैन । आफूले गरेका हरेक गतिविधि, आफूले बोलेका कुरा सधैं सही लाग्छन्, राम्रा लाग्छन् तर कुनै बेला आफूले गरेका राम्रा गतिविधि आफूलाई सही लाग्दालाग्दै अरूलाई गलत लागिरहेको हुनसक्छ । हामी आफूले राम्रो सोचेर बोलिरहेका हुन्छौं सुन्नेले त्यसको गलत अर्थ लगाएर सुनिरहेको हुन्छ वा उसको बुझाइ गलत भैरहेको हुनसक्छ ।
कविता शर्मा, वैशाख ३, २०७५
म देशका लागि के गर्न सक्छु ?
एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी भनेझैं सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सकेको काम गरे देश विकास हुन्छ । आमनागरिकका हैसियतले आ–आफ्नो क्षेत्र, पेसा तथा कर्ममार्फत हामीले के गर्न सक्छौं आफ्नो मुलुकका लागि ? हामी जहाँ, जसरी र जस्तो स्थानमा छौं त्यहीँबाट त्यसरी नै आफू सक्दो गर्न सकेको खण्डमा देशमा सभ्यता बढ्दै, भ्रष्टाचार घट्दै एवं लापरबाही तोडिँदै जान्छ ।
नारी संवाददाता , वैशाख २७, २०७४
वर्ष २०७३ सालमा सञ्चारमाध्यममा सबैभन्दा बढी छाउने महिला को होलान् ? निश्चय नै कौतूहलको विषय बन्न सक्छ । वर्षभरिका न्युजमेकर महिलाहरूको खोजी गर्ने क्रममा नारीले सबैजसो सञ्चारमाध्यमका समाचारलाई फर्केर हेर्ने प्रयास गरेको थियो ।
अश्विनी कोइराला, वैशाख २७, २०७४
जो तानिए विवादमा
दर्जनौं महिला परिश्रमले प्रगतिको सिँढी उक्लिरहँदा केही महिलाले भने अनपेक्षित विवादको सिकार हुनुपर्‍यो जसमध्ये केही महिला आफ्नै कारणले र केही महिला बाहिरी कारणले असफल भए ।
नारी संवाददाता , वैशाख २६, २०७४
नवदेवी सम्मान–२०१६ को चौधौं संस्करण सम्पन्न
सेलिब्रेटिङ वुमनहुड (नवदेवी सम्मान)–२०१६ को चौधौं संस्करण गत शनिबार सम्पन्न भएको छ । एसएसवाई (क्रियटिभ स्टेटमेन्ट्स) को आयोजनामा सन् २००२ देखि वार्षिक रूपमा निरन्तर आयोजना गरिएको सेलिब्रेटिङ वुमनहुड (नवदेवी सम्मान) मा विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो सीप, मेहनत र परिश्रमद्वारा समाजमा योगदान पुर्‍याइरहेका परिवर्तनका संवाहकलाई एकैथलोमा राखेर सम्मान गरिन्छ ।
नारी संवाददाता , जेष्ठ २५, २०७३
राष्ट्रपति भण्डारी विश्वकै ५२ औं शक्तिशाली महिला
नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विश्वकै ५२ औं शक्तिशाली महिला भएकी छिन् । चर्चित पत्रिका फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका